Bridges | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
365 Mpandeha an'arivony isan'andro tao Marmaray, fiara 15 an'arivony isan'andro amin'ny maritioran'ny maritiora Turhan, Fatih Sultan Mehmet Vakif Anjerimanontolo momba ny lalàna ao amin'ny efitrano fivoriambe tao amin'ny Campus Halic "Lahateny ho an'ny tanàna sy ny lalàna" [More ...]
Fiovana eny amin'ny làlan'ny làlambe sy ny tetezana; Miaraka amin'ny modely "vidin-tariby" nomanin'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa handalovana amin'ny làlambe sy ny tetezana, ny olom-pirenena dia hampiasa ny lalana tolotra mora kokoa ao anatin'ny andro sy ora vitsivitsy. Mitombo ny karama arakaraka ny hamafin'ny fangatahana na [More ...]
Nianjera ny tetezan'i Kadikoy Ibrahimaga! Làlana 5 Moon Pedestrian; Manomboka ny asan'ny fanapotehana ao amin'ny faritra nohavaozina ny tetezana Ibrahimaga ao Kadikoy ny Kaomin Metropolitan Istanbul. Ny fanamboarana ny tetezana Ibrahimaga dia afaka volana maromaro amin'ny 5. Gen. Şahap, noheverin'ny fo ho an'ny fifamoivoizana any amin'ny distrikan'i Kadıköy any Istanbul [More ...]
Ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia mitarika ny mpampiasa ny solika hafa. Fiara miaro ny tontolo iainana sy lafo vidy miaraka amin'ny LPG Araka ny angon-drakitra TURKSTAT an'ny 2019, ny 37 dia mandrafitra ny isan-jaton'ny fiara. Isan-taona dia mihamaro hatrany ny mpamily alefa amin'ny LPG [More ...]
Mitohy amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka ny Kartepe Summit-2019, izay miompana amin'ny 'Urbanization and Happy Cities'. Nandritra ny fihaonana an-tampon'ny distrika Kartepe, 'City and Transportation' no niadian-kevitra. Nandritra ny fivoriana, Prof. Gebze Technical University. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu Lalana mankany an'izao tontolo izao miaraka amin'ny seranan-tsambo ao Kocaeli [More ...]
Torkia ny toe-karena dia lasa ny tetezana ny sambo sy ny mandroaka ny fidiram-bola homarinana avy amin'ny Janoary-dia vanim-potoana Septambra 1 lalambe tapitrisa lavitrisa 434 504 391 arivo kilao. Raha ny angon-drakitra momba ny talen'ny jeneraly foibe amin'ny làlambe, 15 Jolay martyrs sy Fatih Sultan any Istanbul [More ...]
Ny tetezana eo amin'ny Fantsona Porsuk, izay manampy ny hakanton'ny Eskişehir, dia mitohy ny asa fikojakojana sy fanamboarana ny Kaominin'i Metropolitan. Ny fikolokoloana ireo tetezana, iray amin'ireo mariky ny Eskişehir, dia nanomboka tamin'ny herintaona ary nitohy tamin'ity taona ity. Ekipa eo amin'ny vala sy ny zaridaina [More ...]
Balıkesir Metropolitan Munisipaly, 3 metatra mijanona ao amin'ny tetezana Mampidi-doza mba hampiasa an'i Gömeç. Ny tetezana namboarina indray dia nanomboka ho roa refy amin'ny 11 metatra toradroa 30 metatra ny sakany. Balıkesir Mayor Metropolitan Yücel [More ...]
Nangoninay ny malaza indrindra amin'ny famatsiam-bola Shina any amin'ny firenena maro ao anatin'ny Tetikasa Belt Road. [More ...]
Ny Direction Générale d'Aglise (KGM), anio (7 Oktobra) dia mahomby amin'ny làlambe lehibe sy ny tetezana, mitombo ny salan'isa isan-jato amin'ny 20. Amin'ny ankapobeny, ny 7 dia mihatra amin'ny làlan'ny lalam-by sy ny tetezana manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Oktobra. [More ...]
Ben'ny tanànan'i Ordu Metropolitan Mehmet Hilmi Guler, ny làlan-dranomasina Mainty amoron'ilay tetezana dia nanamboatra safidy hafa tamin'ny tetezan'i Melet. Namboarina teo amin'ny reniranon'i Melet teo amin'ny làlana andrefan'ny ranomasina maintin'ny alàlan'ny hetsika nataon'ny Ordu Metropolitan Mundu. [More ...]
Governoranakkale Governor Orhan Tavlı, 18 March 2017 momba ny fototra napetraky ny filoha Recep Tayyip Erdogan 1915 Çanakkale Bridge, ny fizika fanamboarana no nodinihina. Lehiben'ny inspektera momba ny fananana Naci Çetin Akder sy Ali Alper Orkun, Tahir Şahin, Governoran'i Distrika ao Lapseki [More ...]
Kocaeli Metropolitan Munisipaly, izay manasongadina fa zava-dehibe ny tetik'asa fitaterana ao an-tampon-tanàn-dehibe, dia manohy miasa amin'ny tetikasa hanamora ny fitateran'ny olom-pirenena monina eny amin'ny manodidina eo afovoany. Amin'ity lalana ity, eo amin'ny lalana mifandray eo amin'ny Distrikan'i Körfez Çıraklı sy ny Distrikan'i inceavuşlu [More ...]
Tsy tratrarina ny ampahatelon'ny fampielezan'ny fiara nomena ny tetezana YSS
CHP Istanbul Solombavambahoaka Haja Adıgüzel, Ivom-pifandraisana an'ny filoha (CIMER) Yavuz Sultan Selim Bridge momba ny fangatahana ho an'ny daholobe dia nizara ny valin'ny fangatahana. Raha ny fampahalalana azon'i Adıgüzel YSS Bridge dia salan'isa isan'andro amin'ny faha-1 tapitrisa 800 arivo tapitrisa. [More ...]
Fangatahana fanimbana tao amin'ny tetezana Bosporus taorian'ny horohorontany tany Istanbul
IMMoglu Ekrem Imamoglu, horohoron-tany Silivri miorina amin'ny haben'ny 5.8 AKOM'a nandalo. Imamoglu, izay te-handalo ny olompirenena Istanbul sy ireo tanàna manodidina, dia nilaza fa fampitandremana io horohorontany io. Ilay horohoron-tany, mila fanetsiketsehana ny nasionaly [More ...]
Ny tongotr'i 1915 Canakkale Bridge dia mitohy
Apetraka faharoa dia napetraka tao amin'ireo rindran'ny tilikambo 1915 Dardanelles Bridge namboarina tao amin'ny Dardanelles ary ny tongotra dia miakatra iray fanampiny. Hita tamin'ny Cannkkale 18 martsa 2017 March [More ...]
4 an'izao tontolo izao. laharana
Ny fananganana 2014 368 dia nanomboka ny vidiny mitentina kilao kilao nandritra ny haingam-pandeha farany. Ny tetezana, izay hiditra amin'ny literatiora eran'izao tontolo izao rehefa vita, dia mikendry ny ho vita ary sokafana amin'ny fifamoivoizana any 2020. Eo anelanelan'ny làlambe Malatya-Elazığ, ny Kianjan Kömürhan ary [More ...]
Ny tetezana Osmangazi 3 dia mandalo ny antsasak'adin'ny fiantohana
Voalaza fa fiara 2016 tapitrisa dia niampita ny tetezana Osmangazi nandritra ny vanim-potoana 2019 isan-taona, mandrakotra ny Jolay 3 sy June 22. Ny tetezana dia miantoka ny mandoa 14 tapitrisa 600 arivo (3 tapitrisa 43 arivo fiara 800 arivo isan-taona). Barb [More ...]
Ny fantsom-pifandraisana mankany amin'ny Hopitalim-panjakana Türkoğlu
Kahramanmaraş Metropolitan munisipalin'ny Türkoğlu Distrika foibe amin'ny fananganana ny tetezana eo amin'ny hopitalim-panjakana İmalı Creek Türkoğlu mankany 2200 metatra 150 metatra dia hianjera. Ny tanàna ao amin'ny distrikan'i Türkoğlu dia ao amin'ny distrikan'i Kahramanmaraş [More ...]
Namadika ny tantara ny 'Bridge of Death' nataon'i Viransehir
Ny Kaominin'i Metropolitan dia nanomboka fanamboarana tetezana vaovao tamin'ny fanoloana ny tetezana izay antsoina hoe Kôngkalan'ny Fahafatesana ın nataon'ny mponina ao amin'ny faritra. [More ...]